Bit By Bit - Ịmepụta mmekọrịta ọnụ - 5.5.4 Kwado na anya
Ugbu a na ị nwere ndị dịgasị iche iche na-arụkọ ọrụ ọnụ na nsogbu sayensị bara uru, ma ị lekwasị anya n'ebe ọ ga-esi bụrụ ihe kasị baa uru, jide n'aka na ị ga-ahapụ ohere maka iju gị anya. Ọ dị mma nke ọma na ndị ọkà mmụta sayensị amaala aha ụyọkọ kpakpando na Galaxy Zoo ma tụba protein na Foldit. Ma, n'ezie, nke ahụ bụ ihe arụ ọrụ ndị a iji mee. Kedu ihe dị ịtụnanya karị, n'echiche m, bụ na obodo ndị a emepụtawo sayensị nke ndị ha kere eke na-atụghị anya ya. Dịka ọmụmaatụ, obodo ndị dị na Zoo achọpụtawo otu ọhụụ nke ihe gbasara mbara igwe nke ha kpọrọ "Green Peas."
N'isi mmalite nke ọrụ Zoo Zoo, mmadụ ole na ole hụrụ ihe dị iche iche na-acha akwụkwọ ndụ, ma mmasị ha na-eti mkpu mgbe Hanny van Arkel, onye nkụzi ụlọ akwụkwọ Dutch, malitere otu eri na mkparịta ụka forum Zoo na isiokwu na-adọrọ adọrọ: "Nye Peas a Ohere. "Ebumnuche ahụ, nke malitere n'August 12, 2007, malitere iji njakịrị kwuo, sị:" Ị na-anakọta ha maka nri abalị? "" Peas stop, "na ihe ndị ọzọ. Ma n'oge na-adịghị anya, ndị Zoo ndị ọzọ malitere ịde peas ha. Ka oge na-aga, ndị ọrụ ahụ ghọrọ ndị ọrụ aka na nkọwa zuru ezu, ruo mgbe ihe ndị dị ka nke a malitere igosi: "Ogwe nke OIII (akara 'pea', na 5007 angstrom) na ị na-agbaso agbanwe dị ka \_(z\_) abawanye ma pụọ n'ime infra-acha ọbara ọbara banyere ihe dị ka \_(z = 0.5\_) , ntụgharị ahụ adịghị anya " (Nielsen 2012) .
Ka oge na-aga, ndị Zoo ji nwayọọ nwayọọ ghọta ma na-eme ka ihe ndị ha na-ekwu banyere peas na-edozi ha. N'ikpeazụ, na July 8, 2008-ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ zuru ezu mgbe nke ahụ gasịrị-Carolin Cardamone, nwa akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na mbara igwe na Yale na onye òtù òtù Zoo Zụlị, sonyeere eri ahụ iji nyere aka n'ịhazi "Pea Hunt." Ọrụ ndị ọzọ na-esite na July 9, 2009, e bipụtara otu akwụkwọ na Monthly Notices of the Royal Astronomical Society na isiokwu bụ "Galaxy Zoo Green Peas: Nchọpụta nke Klas nke Compact Extremely Star-Forming Galaxies" (Cardamone et al. 2009) . Ma mmasị na peas akwụsịghị n'ebe ahụ. N'ikpeazụ, ha bụ isiokwu nke nyocha ọzọ nke ndị na-enyocha mbara igwe gburugburu ụwa (Izotov, Guseva, and Thuan 2011; Chakraborti et al. 2012; Hawley 2012; Amorín et al. 2012) . Mgbe ahụ, na 2016, ihe na-erughị afọ 10 mgbe post nke Zooite gasịrị, otu akwụkwọ e bipụtara na Nature nyere Green Peas nkọwa dị ka nkọwa dị mkpa maka otu ihe dị mkpa ma dị mgbagwoju anya maka ịmepụta ụwa. Ọ dịghị nke ọ bụla e chetụrụla mgbe Kevin Schawinski na Chris Lintott na-ebu ụzọ tụlee Zoo Zoo na Oxford. Ọ dabara na, Zoo Zoo nyere ndị a aka ịtụnanya ihe ndị a na-atụghị anya ha site n'ikwe ka ndị na-akpakọrịta na-ekwurịta okwu.